रोकियो बी एण्ड सी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तयारी « Nepal Health News
रोकियो बी एण्ड सी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तयारी
२०७४, २० जेष्ठ शनिबार १२:२४ मा प्रकाशित
२० जेठ । पूर्वी नेपालको झापास्थित बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने सरकारको तयारी रोकिएको छ । यो सँगै डा. गोबिन्द के.सी.ल शुरु गर्ने भनिएको अनसन पनि रोकिएको छ । तर, उनले नयाँ माग राख्दै सरकारलाई दुई दिने अल्टिमेटम दिएका छन् र माग पुरा नभए सोमबारबाट अनसन सुरु गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बिर्तामोडको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनेबारे छलफल भएको थियो । बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री गगन कुमार थापा अनुपस्थित थिए भने कांग्रेस मन्त्रीहरुले स्वास्थ्यमन्त्री नभएको भन्दै यसबारे निर्णय नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए । तर, बी एण्ड सीलाई सम्बन्धन दिएको भन्दै समाचारहरु आएपछि डा. केसीले अनसन बस्ने चेतावनी दिएका थिए ।
उनले सम्बन्धन दिने निर्णय फिर्ता हुनु पर्ने, आफूसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन र चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई आफूहरुको सुझाव अनुसार पास गर्न माग राख्दै सरकारलाई शनिबार २ बजेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ । स्रोतका अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले डा. केसीसँग भएको सहमति अनुसार सम्बन्धन प्रक्रिया रोक्नु पर्ने बताएका थिए । साथै सरकारले निर्णय गरे डा.केसी अनसन बस्ने र असारको पहिलो साता गएर फेरि अनसन तोडाउन अर्को सम्झौता गर्नुपर्ने बताए । लगतै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ल ठीक छ भन्दै सम्बन्धन प्रक्रिया अघि नबढाउने बताए ।
डा. केसीको नयाँ माग
सरकारको यो निर्णयपछि डा. केसीले शनिबार ४ बजेबाट सुरु गर्ने भनिएको अनसन स्थगित भएको छ । तर, उनले नयाँ माग राखेर सरकारलाई दुई दिने अल्टिमेटम दिएका छन् । उनले आईओएममा सहायक डिन र क्याम्पस प्रमुख वरिष्ठताका आधारमा तत्काल नियुक्त गर्नुपर्ने, विद्यार्थी भर्ना र शुल्क निर्धारणबारे आईओएमबाट खोसिएको अधिकार फिर्ता गर्दै त्रिवि पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, आईओएमलाई पूर्ण स्वयत्तता दिनुपर्ने र स्नातकोत्तर तहमा योग्यथा क्रमका आधारमा २३ लाख ५० हजार शुल्क कायम हुने गरी भर्ना लिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । आफ्ना माग ४८ घन्टा अर्थात सोमबार ४ बजेसम्म पुरा नभए अनसन बस्ने डा. केसीको चेतावनी छ ।